Ciidamada Somaliland oo xabsiga u taxaabay wiilkii dhawaan laga soo masaafuriyay Imaaraadka – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Ciidamada Somaliland oo xabsiga u taxaabay wiilkii dhawaan laga soo masaafuriyay Imaaraadka
Ciidamada maamulka Somaliland ayaa xabsiga u taxaabay Ismaaciil Cumar Pakistaani oo ahaa wiilkii dhawaan laga soo masaafuriyay dalka Isutaga Imaaraadka Carabta, xilli uu dalkaasi kaga qeyb-galaayay tartanka quraanka kariimka.
Ismaaciil Pakistaani ayaa muuqaal uu dhawaan soo duubay ku sheegay in diidmada loo diiday abaal-marinta iyo inuu sii dhameeysto ka qeyb-galka tartanka quraanka kariimka ee Imaaraadka Carabta ay sabab u ahayd, kadib markii dowladda Soomaaliya ay ka biyo diidday inay xiriirka u jarto dowladda Qadar.
Wakiilka maamulka Somaliland u fadhiya dalka Imaaraadka Carabta Baashe Cawil oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in Ismaaciil Pakistaani ay ciidamada Somaliland ka qabteen garoonka diyaaradaha ee Cigaal International Airport-ka ee magaalada Hargeysa, xilli uu doonayay inuu halkaasi ka dhoofo.
Baashe Cawil ayaa sheegay xilliga la qabanaayay Ismaaciil Pakistaani inuu kusii jeeday dalka Qadar, balse ciidamada Somaliland ayaa la sheegayaa inay haatan arrintiisa baaritaano ku haayaan.
Ismaaciil Pakistaani ayaa lagu eedeeyay inuu si qarsoodi ah ku doonayay inuu ugu safro dalka Qadar, xilli ay Somaliland shaacisay inay xiriirka diblomaasiyadeed u jartay dowladaas.
Si kastaba ha ahaatee, dowladaha Masar, Sucuudiga, Baxreyn iyo Isutaga Imaaraadka Carabta ayaa dhawaan shaaciyay inay gebi-ahaan xiriirka diblomaasiyadeed u jareen dowladda Qadar, kadib markii ay ku eedeeyeen inay taageerto ururo argagaxiso ah.